Deg Deg:Sarkaal Turki Ah Oo Dhirbaaxay Masuul Kamid ah Dawladda Somaliya – KHAATUMO NEWS
Deg Deg:Sarkaal Turki Ah Oo Dhirbaaxay Masuul Kamid ah Dawladda Somaliya
Qaar kamid ah shaqaalaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa maanta sameeyay shaqo joojin, kadib markii mid kamid ah mas’uuliyiinta duulimaadka Muqdisho ee diyaaradaha, islamarkaana u dhashay Turkiga, uu dharbaaxay muwaadin Soomaali ah oo ka tirsan shaqaalaha garoonka.
Falka uu sarkaalka sare ee Turkish-ka kula kacay wiilka Soomaaliga oo ka tirsan qaybta taraafikada ee garoonka diyaaradaha, ayaa waxaa ka dhashay gacan ka hadal labadooda dhex maray iyo dood badan oo ilaa hadda ka taagan gudaha garoonka.
Dhamaan shaqaalaha taraafikada ee haga diyaaradaha ama diyaaradaha soo dagaya geliya baakinka ayaa maanta sameeyay shaqo joojin, iyadoo ay halis gashay mid kamid ah diyaaradaha shirkadda Turkish Airline oo maanta ka soo degtay Muqdisho.
Qof ka tirsan shaqaalaha garoonka ayaa Khaatumonews u sheegay, “halis wayn ayaa maanta dhacday waxaana isku baabi’i gaaray diyaarado baakin ku jiray iyo diyaaradda Turkish Airline oo saakay soo degtay kadib markii ay shaqo joojin sameeyeen shaqaalaha baakinka diyaaradaha” ayuu yiri mid kamid ah shaqaalaha airport-ka Muqdisho ee Aadan Cadde.
Previous Post: DAAWO:Beesha Majeerten oo 12 Sano Kadib Ogaatay Halis Dhulbahante Ka Digaayay.
Next Post: Deg Deg Daawo:Muuse Biixi OO Xidhay Dekeda Berbera,